Puntland oo qaadacday doorashadii guddigga olombikada Soomaaliya
Home Sports Puntland oo qaadacday doorashadii guddigga olombikada Soomaaliya
Maamulka Puntland ayaa ka hor yimid doorashadii guddigga olombikada ee dhawaan lagu qabtay Muqdisho.
Shir jar’aaid oo u qabtay Garowe wasiirka shaqada, shaqaalaha, dhallinyarada iyo isboortiga ee Cabdiweli Xirsi Cabdulle ayuu ku sheegay in aysan aqoonsaneyn guddiga cusub ee olombikada Soomaaliyeed.
Sababta ayuu ku sheegay wasiirka dhammaan xubnaha cusub ee loo doortay guddiga ay ka soo jeedaan hal gobol oo ka tirsan oo ah koonfurta sida uu hadalka u dhigay.
Wuxuu kaloo sheegay in xubnaha tobanka ka badan ee loo doortay mas’uuliyiinta guddiga ay ka soo jeedaan hal gobol oo ka tirsan dalka, isla markaana aanay matali karin Soomaaliya oo dhan sida uu hadalka u dhigay.
Wasiirka ayaa sheegay in Puntland ay go’aan ka qaadatay doorashadaas maadama markii ay dhageysatay cabashada guddiga olombikada Puntland oo aan wax talo laga siin doorashada dhacday, isla markaana aan la siin fursaddii uu ugu qeyb-gali lahaa doorashada la dhaliilay.
Ugu dambeen wasiirka ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda Sportiga, inay si deg deg ah u farageliso arrinta, isla markaana ay baaritaan ku sameyso sharciyadda doorashada dhacday.
Si kastaba, horaantii bishan ayaa guddiga olombikada Soomaaliyeed waxa ay hotelka Al-Jazeera ee ku dhow garoonka Muqdisho ku qabteen doorashada guddoomiye, ku-xigeenno iyo xoghaye guud.
Guddoomiyaha Guddiga Olombikada Soomaaliyeed ayaa loo doortay Cabdullaahi Axmed Tarabbi, guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa loo doortay Axmed Cabdi Xasan (Wataac), guddoomiye ku-xigeenka labaad Xasan Axmed Cabdi, guddoomiye ku-xigeenka saddexaad Ibraahim Abuubakar Shaamo, halka xoghayaha guud loo doortay Duraan Axmed Faarax.